I-Skill ye-Fin Pivot Scuba Skill
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Zakhono
I-Fin Pivot - Ihlamba Njengeentlanzi usebenzisa iSakhono sePivot Scuba seSatifikethi seSatifikethi
I-Fin Pivot: Ukufezekiswa kweNdawo yokuThengela iNdawo engeyiyo yePivot Pivot
I-pivot yokugqibela: I-diver pooyant diver yenza i-pivot yokugqibela. 1. I-diver iqalisa ngokubeka isicatshulwa phantsi. 2. I-diver iphefumula kwaye ikhuphuka ngokukhawuleza. 3. I-Diver iphefumula ize iwele phantsi. 4. I-Diver isenokungasabhukuda ngaphandle kokuthambisa okanye ukuhla. Natalie L Gibb
Bhukuda Njengeentlanzi: Yiba ne-Neutural Buoyant usebenzisa i-Fin Pivot
Ngaba uke watshisa emoyeni wakho ngenxa yokuba ukhaba ukuhlala phaya elwandle? Ngaba wakha waphazamiseka ngesidalwa esithakazelisayo kunye nesiphene esiphezulu? Unokuzilawula ngokubanzi phantsi kwamanzi.
Njengeentlanzi, abantu abachaphazelekayo kufuneka babe nokukwazi ukubhukuda baze bathambile ngaphandle kokutshintsha ubunzulu. Oku kubizwa ngokuba yi- neutral buoyancy , kwaye kunokucaciswa kwimigqaliselo ye-layman njengokungena emanzini ngaphandle kokunyuka phezulu okanye ukuwela ngasezantsi. Izidibanisi zikwazi ukufezekisa ukungahambisani nokungathandabuzeki ngokuguqula izibonelelo zabo (BCs) kunye nokusebenzisa imiphunga.
Funda ngomvakalelo omhle wokungathathi hlangothi.
I-pivot yokugqibela ifundiswa kwizifundo ezisisiseko zokufumana isitifiketi se-scuba kuba ukulawulwa okufanelekileyo kokubaluleka kubalulekile ekudibaneni okukhuselekileyo. UkuDaza kuba nzima xa abantu abahlulekayo ukugcina isikhundla emanzini. Abantu abaye bafunda ukufezekisa ukungathathi hlangothi banokufumana ukuba banokuhlala ixesha elide ngaphantsi kwamanzi kwiitanki zomoya omnye ngenxa yokunciphisa umzimba wabo. Ubungqina bezobuchwepheshe bokungathathi hlangothi kunceda abaninzi ukuphepha ukunyuka ngokukhawuleza, okuyingozi kakhulu ekudibaneni: kungabangela ukuphazamiseka kwamaphaphu (ukuphaphazeka kwemiphunga) kunye nokugula kokunciphisa (ukugoba).
I- pivot ekugqibeleni yinkqubo ebalulekileyo esuka kwiikhosi zeziqinisekiso ze-scuba ezibanceda abahlukahlukeneyo ukuba baziphathe ngokungahambisani nokusebenzisa iipopu kunye ne-BCDs. Ingqiqo kukuba umphambukeli onobungakanani obufanelekileyo bomoya kwi-BCD yakhe yokungahlambululi ngokungathandabuzekiyo unokunyuka aze ahlawule ngokuphefumula nokuphelisa imiphunga yakhe (ukuphefumula nokuphuma). I-pivot yokugqibela ingaqulunqwa ngokukhawuleza emva kokuzala okanye nayiphi nayiphi na ixesha ngexesha lokudlula xa i-diver ivakalelwa kukuba ayiyikuthi iphephile.
I-Fin Pivot: Ukukhulula uMoya ovela kwi-BC
I-diver diverts the air from BC ngexesha lokugqiba i-pivot scuba. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Qalisa i-pivot ekupheleni. Ukukhulula wonke umoya ovela kwi- compensationator (BC) njengoko kufundiswa kwiinkalo ezininzi zokuqinisekisa iziqu ze-scuba : Kneel, welula i-hose deflation ye-BC ephakamileyo ngaphezu kwekhanda lakho njengoko iya kuhamba, kwaye uxhomeke emva xa uqhubekisa iqhosha elichasayo.
I-Pivot ye-Fin: Beka i-Flat Flat phantsi
I-diver in the start of position for the pivot end. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Ukuqalisa isakhono sokuqinisekisa isicatshulwa se-pivot scuba sokugqibela , ubeke isicatshulwa phantsi kunye nemilenze yakho iqonde kunye neengcongolo eziqhekekileyo. Kufuneka uhlale phantsi kungekho mzamo. Ukuba akunjalo, cinga ukongeza isisindo esingaphezulu.
I-Pivot ye-Fin: Inhale ukuvavanya ukunyuka kwakho
Iingxube zeentambo zokunyuka ukunyuka ngexesha lokugqibela. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Ukwenyuka ngexesha lokugqibela, phakamisa elinye ixesha elide, elincinci, ukuphefumula. Oku kufuneka kuthathe imizuzwana engu-8 ukuya kwe-10, uze uzalise imiphunga yakho ngaphezu komphefumlo oqhelekileyo. Ukuba ungeyinto engathandabuzekiyo, uya kuvuka ngokukhawuleza. Ungayisebenzisi ngezandla okanye izibhambathiso zokukuxhobisa ngexesha lokugqibela.
I-Fin Pivot: Yongeza uMoya kwi-BC ukuba kuyimfuneko
I-diver divers air add her BC ngenkqubela phambili. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Kule nqanaba ye-pivot yokugqibela, ukuba awuvuki, awuhlali unomdla. Oku kuthetha ukuba kufuneka ulungele iBCD yakho. Yongeza umfutho omncinci womoya kwi-BCD yakho. Cindezela nje iqhosha le-inflate kanye. Akufanele uvuke uze uphefumle ngexesha lokugqibela.
I-Fin Pivot: Inhale kunye ne-Ascend
Iingxube zeentambo kunye nokwenyuka ngexesha lokugqibela. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Ukuphefumula. Oku kufanele kukunyuke ngexesha loqeqesho lwe-pivot scuba . Ukuba akukho nto eyenzekayo, yongeza enye umoya kwaye uvavanye ukuvuselela kwakho kwakhona ngokuphefumula. Qhubeka uyenza ukuze unyuke lula ngokukhupha. Ukuba kufuneka udibanise ngaphezu kwe-2 okanye 3 ukuqhuma komoya, cinga ukususa ubunzima ngaphambi kokuba uqhubeke ne-pivot yokugqibela.
I-Fin Pivot: I-Exhale neNcitshulwa
I-diver is descending by exhaling during the pivot end. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Zama ukuphefumula ukuhla. Kubalulekile ukuba ube nomonde ngexesha lokugqibela. Ukuphefumula okungenani imizuzwana engama-8 ukuya kwe-10 ukuvumela ixesha lokunciphisa umthamo wamaphaphu ukuze usebenze. Unokwazi ukucinga malunga neengcebiso zemigodi yakho okanye ngamadolo akho xa ulungelelanisa lo msebenzi wesitifiketi se- scuba .
I-Fin Pivot: Qhubeka Usebenza
I-diver diversifier iphumelele ngokungahambisani nendawo ngokusebenzisa ipivot ekupheleni. UHenry Watkins, uFisheye Photography 2009
Qhubeka uqhuba. Injongo ye-pivot yokugqibela ngumoya omnye ukunyuka kunye nomoya omnye ukuhla. Ekupheleni kwalolu hlobo, kufuneka ukwazi ukunyuka nokuhla ubuncinane ubunzima beemitha ezili-3/1 ukusebenzisa imiphunga yakho. Xa ufumana ungakwazi ukulawula lula ukukhupha kwakho usebenzisa ukuphefumla kwakho, uye waphumelela ngokungahambi kakuhle. Ukuba usenokuba nobunzima kunye ne-pivot yokugqibela, qhubeka uqhuba okanye uphazamise i-pivot yakho yokugqibela.
Ikhono lokuqinisekisa isicatshulwa se- pivot scuba singasetyenziselwa ekuqaleni kwe-dive ukulungelelanisa ukungahambisani nokungathathi hlangothi, okanye nanini na ixesha ngexesha lokudlula xa uvakalelwa kukuba kufuneka ulungele ukunyuka kwakho. Inkqubo yokulawula ukunyusa kwakho usebenzisa imiphunga yakho ingasetyenziselwa nanini na ixesha ngexesha lokuthutha ukuze wenze utshintsho oluncinane kumgangatho wakho emanzini ngaphandle usebenzisa i-BC yakho.
Ukukhuselwa kwangaphambili kweDive Ukuhlola iScuba Diving
Indlela yokuQulunqa i-Ascensed Emergency Swimming Ascent (CESA)
Igazi leShift Shift kunye ne-Spleen Impect in Freediving
I-Top Freediving Wetsuit Basics yoLwazi ngaphambi kokuba Uthenge
Indlela yokuKhwala iFrog
Ugcini lweManzi kwiMask yakho yokuDaya?
Iimpawu ezili-10 zokuPhucula ukuLawula kwakho ukuThuthuka kwiScuba Diving
I-Mammalian Diving Reflex ne-Freediving (Apnea)
Uluhlu olufanelekileyo kunye nendlela oluya kuphucula ngayo ukuDaza kwakho
Indlela yokususa iMask yeScuba yamanzi
Iindidi zeeMpahla zoLwazi (iiGear)
Biography kaGilda Radner
Ngaba Ukuqamba Amanga Kuze Kuqiniseke?
Ukusasazwa kwezibonelelo kunye neziphumo
Oko Okuthethwa YiBhayibhile Ngo ... Ukuxhalabisa
Indlela uBongameli be-Obama kunye neLincoln abafana ngayo
Swapping Motorcycle Engines
Iimifanekiso ezithandekayo zezopolitiko zonyaka
I-Wetsuit igcina njani i-Scuba Diver efudumele phantsi kwamanzi?
Imfazwe yaseMelika: uLieutenant General Nathan Bedford Forrest
Isimo seCawa yamaKatolika kwiifomu ezahlukeneyo zeStem-Cell Research
Amagama afunekayo endaweni yokuthi "Uthi"
Ukubeka i-Multi-Line Caption yeTlabel (Kwi-Design-Time)
10 Abaxhamliyo abaphi na umda ochanekileyo